Unqulo & Umoya Iinkolelo Nokufundiswa
Funda ngeeSigqeba ezisixhenxe kwaye Fumana izixhumanisi zeeNkcukacha ezingaphezulu
Iingqungquthela ezisixhenxe-Ubhaptizo, iSiqinisekiso, iSidlo esingcwele, Ukuvuma, Umtshato, iMithetho eNgcwele, kunye nokutyanjiswa kwabagulayo-bubomi beCawa yamaKatolika . Yonke imiramente yamiselwa nguKrestu ngokwakhe, kwaye ngamnye ngumqondiso wangaphandle wenceba yangaphakathi . Xa sithatha inxaxheba kubo ngokufanelekileyo, ngamnye usinika izibongo- kunye nobomi bukaThixo emphefumlweni wethu. Ekukhulekeleni, sinika uThixo oko sikumfaneleyo; kwii-sakramente, Usinika izipho eziyimfuneko ukuze siphile ubomi bobomi bokwenene.
Iingqungquthela zokuqala ezintathu-Ubhaptizo, iSiqinisekiso kunye noMoya woButhixo-ziyaziwa ngokuba yimisakramente yokuqalisa , kuba ubomi bethu bonke njengomKristu kuxhomekeke kubo. (Cofa kwigama leSakramente nganye ukuze ufunde kabanzi malunga naloo mthendeleko.)
ISigrament of Baptism
ISigramente yoBhabhathiso , yokuqala yeemisakramente ezintathu zokuqalisa, yinto yokuqala yeesakramente ezisixhenxe kwiCawa yamaKatolika. Isusa isono kunye neempembelelo zeSono Sokuqala kwaye sibandakanye ubhaptizwe kwiCawa, iQumrhu Lamazwi likaKristu emhlabeni. Asikwazi ukugcinwa ngaphandle kokubhaptizwa.
Yintoni Eyenza Ubhaptizo Lungqinisiseke?
Kufuneka Kuphi Ubhapathizo LwaseKatolika?
ISigrament of Confirmation yeso sibini kwiisamramente zokuqala zokuqala, ngokuba, ngokulandelelanayo, kwalawulwa ngokukhawuleza emva kweSigramente yobhaptizo. Ukuqinisekiswa kufezekisa ubhaptizo lwethu kwaye kusilethela izipho zoMoya oyiNgcwele owanikezwa kubapostile ngeCawa yePentekosti .
Ziziphi iimpembelelo zeSigramente soViniso?
Kutheni amaKatolika athanjiswe ngu-Chrism kwiNkqinqqqqqqiso?
ISigrament of Holy Communion
Nangona amaKatolika eWest namhlanje ngokuqhelekileyo enza iMidlobano yokuQala ngaphambi kokuba afumane iSigrament of Confirmation, iSigrament of Holy Communion , ukumkelwa kweBhunga likaKristu kunye neGazi, yayisisiseko sembali yesithathu yeemisakramente zokuqalisa.
Le sakramente, esiyifumana ngokuqhelekileyo ebomini bethu, ngumthombo weentsikelelo ezizingcwalisayo kwaye zisinceda sikhule ngoYesu Kristu. I-Sacrament of Holy Communion kananjalo ngamanye amaxesha kuthiwa yi- Eucharist .
Yiyiphi iMithetho yokuzila ukutya ngaphambi kokutya?
Ndingafika njani ixesha elide kwiMisa kwaye ndifumana iSidlo?
Kutheni amaKatolika afumana kuphela uMkhosi kwiNtlanganiso?
I-Sacrament of Confession , eyaziwa ngokuba yiSigramente yePenteko kunye neSigramente yoKhulisana, enye yeyona nto ingacaciswanga, kwaye isetyenziswe kangangoko, iisramram kwiCawa yamaKatolika. Xa sihlanganisene noThixo, ngumthombo omkhulu wobabalo, kwaye amaKatolika akhuthazwa ukuba asebenzise ngokuninzi, nangona ukuba awazi ukuba enze isono sokufa.
Izinyathelo ezisixhenxe zokwenza ngcono ukuvuma
Ngamaxesha amaninzi Ngaba Uya Kuya Kuvuma?
Ndifanele Ndivume Ngaphambi Kokutya?
Ziziphi Iingonyama Ndifanele Ndivume?
Umtshato, ubudlelwane obungapheliyo phakathi komntu nomfazi ukuzala nokuxhasana, liziko lezemvelo, kodwa linye yeesakramente ezisixhenxe zeCawa yamaKatolika. Njengesakramente, ibonakalisa umanyano kaYesu Kristu kunye neCawa yakhe.
I-Sacrament of Marriage iyaziwa nangokuthi iSigramente yeMatrimony.
Ngaba Ndinokutshata Kwisonto LamaKatolika?
ISigramente yeMiyalo Engcwele
ISigramente Yemiyalelo Engcwele kukuqhubeka kobubingeleli bukaKristu, awawunika abaPostile Bakhe. Kukho amanqanaba amathathu kulo mthendeleko wokulungiswa: i-episcopate, ububingeleli kunye nediaconate.
I-Ofisi yoMbhishophu kwiCawa yamaKatolika
ISigrament of the Anointing of the sick
Ngokuqhelekileyo kuthiwa yiNgqungquthela yokuTywala okanye ukuHluma kokuPhepha, iSigramente yoTygcobo lwabagulayo ilawulwa kokufa kunye nakwabantu abagula kakhulu okanye abaya kusebenza ngokukrakra, ukuze bavuselele impilo yabo kunye namandla okomoya .
Ziziphi Izinto Ezigqityiweyo Ziyakubetha, kwaye Ziyenzeka Njani?
Ukuvuma kunye nexesha lokuQala lokuQala
Ngaba amaKatolika kufanele athethe iHalloween?
Umehluko phakathi koMtshato kunye noMtshato
Ulwazi: Isipho Sesihlanu soMoya oyiNgcwele
Ziziphi iiKadhidi zeNkcazo?
Ukholo, Ithemba, kunye noNcedo: eziNtsingiselo ezintathu zeNkolo
I-Photo Primer kwiDormer
Ukunikela kukaYesu kunye nomhlolokazi (Marko 12: 41-44)
Yintoni uMncedisi weeNtlanganiso?
Ukufundisa Ukuhamba Okufundayo Kwiintsana Nezingane
INgxelo yeBhili yoMongameli kaMongameli
Ininzi Ethetha NgamaKristu Kwiminyaka Eli-10
Ngaba Ndiya KuMisa Ngo-Eva?
Kuphi iSpanishi Ethethayo?
Izaziso eziNtsholongwane Zilumkisa nge "Drano Bomb" Ingozi
20 Imithi engathandekiyo eyekelela konke ukuphumla
I-Entropy of Reaction Example Iingxaki
Iingelosi ze-Guardian zingakunceda njani ukurekhoda iifoto zakho
Indlela yokuqaphela ukuziphatha komlilo wehlathi
Ukuchaneka kwamaVebhu aseJapane 'ukugqoka' kunye 'nokudlala'
Izizathu eziPhambili zokuShintshela kwii-Fuels Alternative
Umculo waseLatin wamahala
Iimfihlelo zabafileyo: Iingcali ezilahlekileyo zikaTeotihuacan - Ukuhlaziywa
Imfazwe Yehlabathi I: Oswald Boelcke